CATL ငါး ဆက်တိုက် ချန်ပီယံ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပါဝါ ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ – Pandaily
CATL ငါး ဆက်တိုက် ချန်ပီယံ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ပါဝါ ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ
Feb 07, 2022, 21:31ညနေ 2022/02/07 22:12:57 Pandaily
တနလၤာေန႔ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းဇယား ေတြအရSNEကိုရီးယား စျေးကွက် သုတေသန ဌာန Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစု ၃၂. ၆% ဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ များကို အကြီးမားဆုံး ကုန်ပစ္စည်း ပေးသွင်း သူအဖြစ် ဆက်လက် ရပ်တည် နေပြီး ပထမ နေရာတွင်ရှိသည်။
CATL သည် ၅ နှစ် ဆက်တိုက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာသည်။ ၂၀၂၀ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် က၎င်း၏ စျေးကွက် ဝေစု သည် ရှစ် ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့သည်။ SNE ကိန်းဂဏန်းများအရ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ စွမ်းအား သည် ၂ ၉၆. ၈ GWh ရှိပြီး ၂၀၂၀ တွင် နှစ်ဆ တိုးခဲ့သည်။
ယခုနှစ် ဇန်န ၀ ါရီလ တွင် CATL သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၁၄ ဘီလီယံမှ ၁၆. ၅ ဘီလီယံ ကြားရှိ မည်ဟု ခန့်မှန်း ထားပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁၅၀% မှ ၁၉၅% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် အများပြည်သူ သိရှိ ပြီးနောက် အမြတ်အစွန်း အများ ဆုံးဖြစ်သည်။
CATL ၏ အကြီးမားဆုံး ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သော LG Energy Solutions သည် စာရင်းတွင် ဒုတိယ နေရာတွင်ရှိသည်။ တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကား စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ၆၀. ၂ GWh တပ်ဆင် ခဲ့ပြီး ဈေးကွက် ဝေစု ၂၀. ၃% ရှိသည်။
အရရိုက္တာLG Energy Solutions ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Kwon Young Soo က ဇန်နဝါရီလတွင် ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ကုမ္ပဏီ၏ စျေးကွက် ဝေစု သည် အနာဂတ်တွင် CATL ထက်ကျော်လွန် မည်ဟုမျှော်လင့် ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိပ်ဆုံး စာရင်း ၁၀ ခုတွင် BYD, China Lithium Technology, Godi Hi-Tech, Envision AESC Group, Svolt စသည့် တရုတ် ကုမ္ပဏီ ၆ ခု ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ BYD သည် စျေးကွက် ဝေစု ၈. ၈% ဖြင့် စတုတ္ထ နေရာတွင်ရှိသည်။ အခြား တရုတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့ သည့် လုပ်ငန်း လေး ခုသည် ၇. ၂% ဖြင့် ၇ မှ ၁၀ ခုမြောက် အဆင့် တွင်ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ဘက္ထရီ ကုမၸဏီႀကီး CATL က ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ အသား တင္ အျမတ္ ေငြ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅၉ ဘီလ်ံ အထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္း
တရုတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့ သည့် လုပ်ငန်း များအနက် Envision AESC Group ၏ မော်တော်ကား စွမ်းအင် ဘက်ထရီ များသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဂဏန်း တစ်လုံး တည်း တိုးတက်မှု ရရှိခဲ့သည်။ ကျန် ကုမ္ပဏီ ၅ ခုသည် ၁၀၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့ပြီး Swater သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၄ ၃၀% ကျော် တိုးတက်ခဲ့သည်။
Tags *CATL | Battery Maker | BYD* | Envision AESC | svolt energy technology